Ukubukeka kuyakhohlisa: 7 kwezigebengu ezinhle kakhulu
Uma ubheka izithombe zalabafana namantombazane, ungase ucabange ukuthi baqhuba ibhizinisi, futhi omunye akanakucabangela ukuthi ngamunye wabo uphule umthetho futhi uyisigebengu. Ukunakwa kwakho kuboniswa yi-TOP yeziphambeko ezinhle kakhulu emhlabeni.
Umlando walowo mfana unesithakazelo kuyo yonke i-intanethi, futhi izithombe zakhe zisanyatheliswa emagazini omagazini abaziwayo. UJeremy Mix uboshiwe ngamaphoyisa ngenxa yokugcinwa kwezikhali ezingekho emthethweni endlini, okugwetshwa iminyaka engu-2 ejele, kodwa lo mfana wadedelwa ejele. UJeremy wathola ibutho labamdumayo futhi wamenywa ukuba asebenze ejensi lokumisa imoto - konke lokhu kwenzeke ngengozi enkulu: izithombe zakhe zafakwa eqenjini lezinkampani zokuqinisa umthetho e-Stockton futhi zaqoqa ukuthandwa okungaphezu kuka-90,000. Manje umsebenzi womfana ukhuphuka entabeni, futhi kungabhekwa njengecala elibhekwe kakhulu kunazo zonke ezweni lanamuhla.
Ngo-2008, eTexas, amaphoyisa agcina intombazane eneminyaka engu-21 ubudala kanye nenkosikazi yobuhle be-El-Paso - Lorena Tavera. Isizathu sokuboshwa kuyinto encane ukweba esitolo: i-blouse itholakala ephaketheni lentombazane, okuyizindleko ezingama-$ 60. Ngokweningi likaLorna, wangena ngengozi into engekho ekhokhelwa esikhwameni sakhe.
Umnikazi wesihloko esithi "Miss Teenager" waseLouisana State - Lindsay Evans - wayenqatshelwe umqhele ohloniphekile ezinsukwini eziyishumi ngaphambi kokuphela kokubusa kwakhe. Isizathu salokhu kwakuyisimo esiyinkimbinkimbi: intombazane nabangani bakhe abazange bakhokhele ibhilikithi ekudleni, futhi, beshiya lapho, bakhohlwe isikhwama sakhe esikhwameni. Esikhathini esikhwameni kwakukhona izinto ezidakayo, ngakho-ke lapho uLindsay ebuya esakhiweni sezinto zakhe, wabekwa icala ngokuphulwa okubili ngesikhathi esisodwa: ukwebiwa okuncane kanye nempahla yezidakamizwa.
Ngo-2010, uMegan Simmons uboshwe ngamaphoyisa ngokuphulwa komgwaqo nokushayela. Izithombe zale ntombazane ngokushesha zahamba ngewebhu emhlabeni wonke futhi zazisetshenziselwa ukukhangisa kwi-intanethi eyaziwa nge-intanethi. Abasebenzisi bezintambo zenethiwekhi yomhlaba wonke ukuthi ukubukeka kahle kwentombazane kanye nokubukeka kwakhe okuthakazelisayo kubangela ukungafani okuvela ngemuva kwefomu lejele, ngakho ubuntu bukaMegan buye kwadumela kwi-intanethi.
Umlingisi omdala wefilimu kanye nomqashi owenziwe kabili wesikhombiso se-"Best Performer of the Year" we-AMN, uTory Black, uboshwe kanye nomlingani wakhe ngoLwesihlanu ekuseni ngenxa yamacala okudlwengula ekhaya. Kwakukhona ukungqubuzana phakathi kwentombazane kanye nale nsizwa, kamuva eyaba yimpi: ngenxa yalokhu, isimo sengqondo sikaTori sasiqothukile kabi, futhi wayebuhlungu futhi ecasula ezithombeni, kodwa ngisho nalezi zingqinamba azizange zonakalise ukubukeka kocansi.
"Ukubonakala kuyakhohlisa" - le nkulumo ingasetshenziswa kuDaniel Nebelun. Naphezu kokubukeka kwayo okukhangayo, uhlobo lwentombazane alukwazi ukubizwa ngokuthi lulula. Ngesikhathi ephikisana nensizwa yakhe, uDaniel wayesephule indlebe, eboshiwe amaphoyisa aseMichigan.
Indaba edabukisayo yenqubo yaseRashiya uJulietta Almazova yashaqeka izwe lonke. Ngo-Agasti 2013, intombazanyana encane enezibhamu zomoya-moya yangena ehhovisi lenkampani yezezimali futhi ngosizo lwezinsongo yathatha yonke imali kubasebenzi behhovisi. Naphezu kobukhulu besenzo sobugebengu, leli cala libe nezimo ezingavamile, ngakho uJuliet wakhululwa ejele. Ngemuva kwalesi sigameko, ngokumangalisa, ibhizinisi lalo modeli lakhuphuka intaba: wamukela isipho sokushada ne-oligarch ephumelelayo futhi uyaqhubeka nokuhlanganyela emisebenzini ehlukahlukene yezithombe.
Uma umyeni engathandi umkakhe: izimpawu ezingu-8
I-Energy Vampire: Indlela yokuyiqaphela nokuyivikela
Indlela yokunquma ikhono lomuntu ngezigxivizo zeminwe
Izinwele zekhalenda ze-Lunar ngo-Okthoba 2017 - Izinsuku ezikhethisayo zokunakekelwa kwezinwele nezinzipho
Lapho lonke ihlobo elifanayo lizofika eMoscow naseRussia ephakathi: Ukubikezelwa kwezibikezelo zezulu
Imithandazo bese ucela ingelosi yakho yokulondoloza ngempilo, uthando kanye nenhlanhla
Kuyingozi ukwenza ultrasound ekukhulelwe
Kungani umuntu adinga uthando?
I-salsa berry sauce
Ungaqala kanjani ubuhlobo?
I-Burger yaseTexas-Mexican ene-Jajun May
U-Evelina Bledans uhleka u-Anastasia Volochkova, isithombe
Izinkolelo ezimbalwa mayelana nezinzuzo zobhiya
Ukuqagela ukuthi ubani esithombeni? Uma ukhubezwa yindoda, khona-ke ufuna ukwenza izingoma zakhe ziphakame
Ukuphila komuntu siqu kaCatherine Klimova. Izithombe zabayeni nezingane
Konke mayelana nokukhetha nokugcina i-hamster
Ama-curly cheeses e-skillet nasehhavini: zokupheka ezithakazelisayo kakhulu ngesithombe
Uma ukuzalwa kwengane kungenakwenzeka, kukhona njalo isizathu nesisombululo
I-Toxicosis ngesikhathi sokukhulelwa nendlela yokulwa nayo
Izimonyo zaseJapane zokunakekelwa kwezinwele
Indlela yokusinda ekufeni komuntu othandekayo
Ukuphulukiswa nemikhiqizo yemilingo yamafutha